I-china isigaba esine-asynchronous motor sokugaya ilitye kunye nokusika umzi mveliso kunye nabathengisi | Ukukhokela
YXP uthotho lobushushu eliphezulu ukulwa umlilo zeemoto fa ...
YEJ2 series waqhekeza electromagnetic isigaba-ezintathu asynch ...
Isigaba sesithathu se-asynchronous motor yokugaya ilitye ...
IE3 uthotho lwentsebenzo yesigaba esithathu asynchr ...
IE2 uthotho ukusebenza-isigaba ezintathu asynchronous ...
Isigaba esine-asynchronous motor sokugaya ilitye kunye nokusika
Iimpawu zenqanaba lesithathu le-asynchronous motor yokugaya ilitye kunye nokusika: isakhelo esincinci, amandla aphezulu, ukusebenza ngokutywina okuhle, inqanaba eliphezulu lokhuseleko, ukungcangcazela kwemoto ephantsi, ingxolo ephantsi, eyomeleleyo kwaye akukho ntshukumo,
Umsebenzi ogudileyo, njl.
Amanqanaba amathathu e-asynchronous Motors zokugaya ilitye kunye nokusika ziphoswa kuthotho lweqokobhe lensimbi
◎ Isakhelo esinguNombolo: 71-132
Indlela yokuSebenza: S1
Iklasi yokuvala: F
Inqanaba loKhuseleko: IP56
Uthungelwano lokuthengisa lweLijiu Motor lusasazeke ngaphezulu kwamaphondo angama-20 kunye nezixeko kubandakanya iNortheast, Northwest, North, Central, South, Southwest and East China. Iimveliso zithunyelwa eYurophu, eMelika, mpuma Asia nakwamanye amazwe nakwimimandla.
I-Lijiu Motor ikhethekile kwimveliso, i-R & D kunye nokuthengiswa kweenjini ezahlukeneyo. Iimveliso zibandakanya i-YE2, YE3, YB3, iinjini zokupholisa, YD2, YEJ2, YVF2, YC / MC, YL kunye nolunye uthotho lwamanqanaba amathathu e-asynchronous motors kunye nezinye iimoto ezizodwa. Imveliso yamkela uyilo olumanyeneyo lukazwelonke, kwaye inqanaba lamandla kunye nobungakanani bokufakwa lihambelana nomgangatho weKhomishini ye-Electrotechnical ye-IEC. Inezibonelelo zokusebenza kakuhle okuphezulu kunye nokugcina amandla, ukuqala torque ephezulu, ingxolo ephantsi, ukungcangcazela okuphantsi kunye nokuthembeka okuphezulu. Iimveliso zidlulisile isiqinisekiso se-European Union's CE kunye ne-China CCC kunye nesiqinisekiso seCQC. Inkampani ifumene isiqinisekiso sekhwalithi esemgangathweni ye-ISO9001. I-Lijiu Motor izinikele ekunikezeleni ezona zisombululo zibalaseleyo kubasebenzisi bamashishini kunye namandla, ngokwezifiso iinjini ezizodwa.
Ukuqamba kunye nokuthembeka sisiseko sam, ukuziqhelanisa neemeko kunye nokuba bhetyebhetye ziluncedo lwethu. Sijonge ukuba ngummeli we "Made in China" kwicandelo leemoto. Inkampani ibambelela kwifilosofi yeshishini "yokuphatha ngokunyaniseka kunye nokuphumelela ngomgangatho". Ukuze sihlangabezane neemfuno zabarhwebi basekhaya nabangaphandle, sizama ukwakha uphawu lwe "Lijiu" kwaye senze "iLijiu" idume kwilizwe liphela nakwihlabathi liphela. Sebenzisa ukuthembeka kwethu kunye nobulumko ukwenza ingomso elingcono ngesandla kunye nawe!
Egqithileyo Isigaba esine-asynchronous motor yempompo yombhobho
Okulandelayo: Amanzi apholileyo kwisigaba esithathu se-asynchronous motor
YEJ2 series waqhekeza electromagnetic-isigaba ezintathu a ...
IE1 uthotho lwezigaba ezintathu ze-asynchronous motor
I-YVP uthotho lwezigaba ezintathu ze-asynchronous motors ze ...